दरबार हल्लाउने त्यो रिपोर्टिङ « Drishti News
दरबार हल्लाउने त्यो रिपोर्टिङ
– केदारमान सिंह
२०३६ साल जेठ १० गते राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गरे । यो खबर सुन्नासाथ बीबीसीका दक्षिणपूर्वी एशिया प्रमुख मार्क टेली नयाँदिल्लीबाट काठमाडौँ आए । म त्यतिबेला एएफपीमा काम गर्थेँ । साथै, हङकङबाट प्रकाशित हुने ‘फारस्टर्न इकोनोमी रिभ्यू’ का लागि पनि मैले लेखहरु लेख्ने गर्थे ।
यो रिपोर्ट बीबीसीबाट प्रसारण भएपछि दरबारमा कसरी सूचना चुहियो भनेर हंगामा भयो । मेरो घरमा को–को आउँछन् ? म कहाँ कहाँ जान्छु भनेर २४सै घण्टा गुप्तचर खटाउने काम भयो । त्यतिबेला शहरभरि बहुदलको पक्षमा लहर आएको थियो । मै पनि युवा जोश बोकेको पत्रकार थिएँ । राज्यले म माथि कडा निगरानी राखेको कुरा मलाई थाहा थियो । तर, म शक्तिशाली मिडियाको रिपोर्टर भएको हुँदा मलाई छुने आँट दरबारले गर्न सकेन । आखिर मैले जनमत संग्रहको विषयमा जस्तो रिर्पोटिङ गरेको थिएँ, त्यस्तै परिणाम आयो पनि ।
त्यतिबेला मार्क टेली बीबीसीका चर्चित रिपोर्टर थिए । उनी काठमाडौँ आएको सुन्दा मैले जनमत संग्रहको रिर्पोटिङका लागि आएका होलान् भन्ने ठाने, पछि उनले मलाई फोन गरेर मसँग भेट्ने समय मागे । मार्क टेलीले मलाई जनमतसंग्रह घोषणा भयो, यस विषयमा बीबीसीका लागि पनि काम गर्न आग्रह गरे ।
उनको कुरो सुनेर मैले भने– मिस्टर टेली आईएम ब्यूरो चिफ अफ एएफपी । म कसरी बीबीसीमा काम गर्न सक्छु होला र ? टेलीले भने त्यो चिन्ता नगर । एएफपीसँग मैले तिम्रो लागि अनुमति लिन्छु भने ।
जनमत संग्रहको घोषणापछि नेपालमा राजनीतिक माहौल तात्यो । देश पञ्चायत र बहुदलमा विभाजित भयो । त्यसै क्रममा पेरिसबाट एएफपीको हेडक्वार्टरले मलाई बीबीसीमा काम गर्न ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पठायो । त्यतिबेला नेपालमा बीबीसीको नेपाली सेवा खुबै मन पराइन्थ्यो । हरेक राजनीतिक दलका नेतादेखि पञ्च र दरबारले पनि नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी सेवा सुन्थे । कतिपय रिपोर्ट मेरो आफ्नै स्वरामा नेपालीमा पनि प्रसारण गथ्र्यो ।
म एक जना डेमोक्रेटिक व्यक्ति भएकोले मैले जनमत संग्रहको समाचार पठाउँदा डेमोक्रेसीकै पक्षमा बढी पठाउँथे । तर, समाचार पठाउँदा निष्पक्ष रिर्पोटिङ गर्नुपथ्र्यो । त्यतिबेला धेरै सञ्चारमाध्यम थिएनन् । बीबीसीको नेपालमा राम्रो प्रभाव भएकोले विपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीको भाषण बीबीसीबाट प्रसारण हुनु पनि बहुदलवादीहरुका लागि ठूलो सहयोग हुन्थ्यो ।
मेरो रिर्पोटिङ सुनेर दरबारियाहरु बीबीसीले राजाको आलोचना नगरिदिए हुन्थ्यो भनेर मलाई घुमाउरो पाराले दबाब पनि दिन्थ्यो । मरिचमानका मान्छेले मलाई फोन गरेर धेरैपटक धम्क्याएको पनि छ । मरिचमान सिंह त्यतिबेला पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा थिए । तिनीले पनि धम्क्याउँथे । तर म उनीहरुसँग डराउँदिन थिए । किनभने म बीबीसी र एएफपीजस्तो विश्वप्रसिद्ध सञ्चारमाध्यमको ब्यूरो चिफ र रिपोर्टर थिएँ ।
एउटा घटना, बहुदलको पक्षमा लाग्ने कर्मचारीहरुमाथि कारवाही भयो । त्यो समाचार मैले ‘ब्रेक’ गरेपछि दरबारमा ठूलो हल्लीखल्ली मच्चियो । कतिपय कर्मचारीले मलाई फोन गरेर धन्यवाद पनि दिए । यसरी पञ्चायतको ठाडो विरोध नगरे पनि घटनाक्रमलाई निष्पक्ष रुपमा प्रस्तुत गर्दा त्यसको ठूलो असर पर्दोरहेछ ।
राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गरेपछि त्यसको विषयमा मलाई एउटा रिपोर्ट बनाउन लण्डनबाट प्रेसर आयो । मैले सोेचे– पञ्चायतका विरुद्ध विद्यार्थीहरुले ठूलो आन्दोलन गरेका छन् । कतिपय विद्यार्थी जेल परेका छन् । कतिपयलाई होस्टेल, होस्टेलमा गएर निर्ममतापूर्वक कुटिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजाले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ‘जनमत संग्रह’को घोषणा गरेको हो । यो विश्वलाई आफू प्रजातान्त्रिक छु भनेर देखाउन गरिएको नाटक मात्र हो । विभिन्न स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यो जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा ५६ प्रतिशत र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा ४४ प्रतिशत मत आउनेछ । यो राजा वीरेन्द्रले चलाखीपूर्वक गरेको ‘स्टेज मेनेजमेन्ट’ मात्र हो भनेर रिपोर्ट पठाएँ ।
एक दिनको कुरा हो– मलाई फोन गरेर मण्डलेहरुले मेरो घरमा आगो लगाइदिन्छु भने । मैले भने, बाबु मैले के अपराध गरेको छु र मेरो घरमा आगो लगाइदिने ? मेरो काम त निष्पक्षरुपमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने काम हो । त्यसो गरेन भने बीबीसीले मैमाथि कारवाही गर्छ । मैले मेरो धर्म निभाएको हुँ । तपाईंलाई म सँग रिस उठेको छ भने मलाई गोली ठोकेर मार्नु । घरमा आगो लगाएर मेरो १६ जना परिवारलाई किन मार्नुहुन्छ भने । मेरो पत्रकारिता जीवनमा यस्ता धेरै रोचक घटनाहरु छन् । समय पाएँ भने ‘दृष्टि’मार्फत पाठकसमक्ष पुग्ने छु ।
काठमाडौं, २८ असार । ‘सहाना प्रधानः नेपाली महिला आन्दोलनकी शिखर व्यक्तित्व’ नामक पुस्तक शनिबार विमोचन
सरकारद्वारा ‘पंक्षी’लाई प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार
इटहरी, २४ असार । ‘पंक्षी बा’को उपनामबाट चिनिने साहित्यकार तथा कलाकार जीवनाथ पोखरेल ‘पंक्षी’लाई संघीय
‘इनफ इज इनफ’ : प्रधानमन्त्री बोलिरहे, युवाले सुनिरहे
एमपी सुब्बा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले ‘कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न सरकार पारदर्शी ढंगले सक्रिय’ रहेको बताइरहँदा
बदलिँदो समाजको संंकेत
दूरदर्शी नेतृत्वले बिर्सनु हुन्न– प्रदर्शन स्थगित भएको छ, टरेको छैन । यी भाइबहिनीहरूले फेरि जुनसुकै
८२ जना संक्रमित थपिए
कार्यकक्षमै इन्सपेक्टरलाई डेढ लाख घुस
अभिताभ र अभिषेकपछि ऐश्वर्या र जयालाई पनि कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, २८ असार । आइतबार पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको छ । ८२ जना
काठमाडौं, २८ असार । लागूऔषध मुद्दाका अभियुक्त छुटाउन भन्दै कार्यकक्षमै गएर इन्सपेक्टरलाई डेढ लाख रुपैयाँ
नयाँदिल्ली । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन र उनकी सासू जया बच्चन पनि कोरोना संक्रमण